Wasiiradda dhaqaalaha Iswiidhan: “Is dhex-galku siddii loogu talagalay uma socdo” | Somaliska
Shaqada & Ganacsiga / Siyaasada / Socdaalka / Waxbarashada
Wasiiradda dhaqaalaha dalkaan Iswiidhan, Magdalena Andersson ayaa aaminsan in Iswiidhan aannu u baahneyn in ay qaxooti ay aqbalaan. Hadalkan ayey ku micneeysan i ay ugu wacan tahay hannaanka is dhex-galka oo siddii la doonayey aannu u soconan arrimo badan oo is biirsaday.
Waxaa sidoo kale ay sheegtay in magangalyo doonka ay u furan tahay wado kale oo ah ineey dalalka kale ee Yurub ay magangalyo weydiistaan halkaas oo ay sheegtay in ay soo bbaxaan fursado suuragal kadhigaya in codsigooda magangalyo la aqabalo. Wasiiradda ayaa toddobbaadkan soo bandhigtay warbixintii ugu dambeeysay ee xagga dhaqaalaha dalku marayo.
Waxaa ay sawirtay muuqaal tilmaamayo in shaqo la’aantu yaraaneeyso dhaqaaluhuna kobcayo. Wasiiradda ayaa dhinaca kale walaac ka muujisay guryo la’aanta ka taagan dalka, taas oo ay muujineeyso in dadka ajaanibta ah ee dalka dibadiisa ku dhashay ay yihiin kuwa ugu badan ee weli shaqo la’aantu heeyso. Waxeey sidoo kale sheegtay in tiro koob la soo bandhigay uu muujinayo sidda iswiidhish-ka cusubi ugu adagtahay ineey ka dhex muuqdaan suuqa shaqada.
“Is dhex-galku siddii loogu talagalay uma socdaan, xitaa wixii ka horeeyey 2015-kii, aniga waxaa ii muuqda in eeynaan awoodin inaan qaabilsano magangalyo doon tirro badan maadama eeynaan weli is dhexgalkii tan iyo inta aann ka wanaajineeyno is dhexgalka, mana . u wanaagsan dadka cusub ee imanaya iyo bulshadaba” ayey tiri Magdalena Andersson oo muujineysa culeeyska xagga bulshadda ka heeysta is dhexgalka iyo qaxootiga tirrada badan ee dalka ku soo jabay sanadihii ugu dambeeyey.
Ugu dambeyntiina wasiiradda waxaa ay xustay in sida ugu wanagasan ee is dhexgalku ku hagaagi karo ay tahay in la hello dhalaanka oo kora islamarkaasina eey arkaan waalidood oo shaqeeynaya si ay xagga shaqada tusaale wanaagsan ugu noqdaan. In qoysaska ilmaha badan heeysta loo helo guryo ku filan, carruuraha oo iskuuladda aada kuna da daalaan aqoonta. Waxeey farta ku fiiqday in is badal lugu sameeyn doono hannaanka dejinta magangalyo doonka, siyaasadii waxbarashadda si suuqa shaqada si deg deg ah looga dhex muuqdo.
Madaxweynaha Somalia oo la kulmay raysal wasaaraha Sweden, isla markaana amaanay filimka laga sameeyay Soomaalida
Kamuunka Norrköping oo ka walwalsansan Soomaalida badan ee imaan doonta